DHAAYAHA SAXAAFADDA Q-13AAD W/Q: Xasan Maxamed Xaaji “Duusoos” | Laashin iyo Hal-abuur
DHAAYAHA SAXAAFADDA Q-13AAD W/Q: Xasan Maxamed Xaaji “Duusoos”
Sooyaalka Xayeysiinta (advertising) 2
Iibinta shaqsiyeed:Iibinta shakhsi ahaaneed waa soo bandhigid shaqsiyeed oo ku saabsan awoodda iibka ee shirkadaha iyada oo ujeeddadu tahay suuq-geynta iibka iyo dhisidda xiriirka macaamiisha. Muuqaalka wanaagsan ee xagga dadweynaha, waxaa jira fursad weyn oo macaamiishu ay rabaan inay ugu jeestaan shirkaddaas. Marka aan qaabeeyo habka loo adeegsado iyo godadka ay ku kala jiraan xayeysiisku waa sidaan:
Xayeysiinta TV-ga 37.7% 34.8%
Xayeysiinta internetka 19.9% 18.2%
Xayeysiinta moobiilka 9.2% 18.4%
Xayeysiinta wargeys 12.8% 10.1%
Xayeysiinta Magazine 6.5% 5.3%
Xayeysiinta Bannaanka 6.8% 6.6%
Xayeysiinta raadiyaha 6.5% 5.9%
Biyo-xayaysiinta 0.6% 0.7%
Qaybtani waa soo koobista hababka ay u kala sarreeyaan agabyada xayeysiintu.
Xayeysiinta TV-ga ee ganacsiga, badanaa waa inta u dhaxeysa laba barnaamij waxaana loo yaqaannaa fasaxyada ganacsiga. Xayaysiintu waxay u oggolaadaan xayeysiiyaha inuu kula xiriiro maqal iyo muuqaal. Iyadoo loo marayo sahanno, kanaallada TV-ga ama kan warbaahineed ee hadba jira ayaa lagu ogaan karaa qiyaastii dhagaystayaasha daawanaya barnaamijka TV-ga. Tani waxay siisaa fursad lagu bartilmaameedsado xayeysiinta dhagaystayaal gaar ah. Tanina waxay awood u siinaysaa iibinta ugu fiican ee diraha, yacni xayeysiiyaha, sababtoo ah waxay jiheyn karaan farriimaha xayeysiiyaasha kala duwan ee dadku ay doonayaan inay usoo jeestaan sidaas darteedna waxay sidoo kale qiimeeyaan waqtiga iyo xiriirrada ay gudbinayaan ee sare.
Kanaallada TV-gu badanaa waxay ku dallacaan booska ay ku xayaysiinayaan ilbiriqsi kasta haddii aysan marin u helin cabirro horumarsan. Qiyaasta ayaa markaa la xisaabiyaa iyadoo lagu saleynayo tirada daawadayaasha ee arka barnaamijka in xayeysiinta lagu muujiyay wax xiriir la leh. Xaaladaha badankood, si kastaba ha noqotee, waxaa jira marin looga heli karo cabiraadda sida dad badani u arkaan xayaysiisyada iyo barnaamijyada, ka dibna qiimaha ayaa loo dejiyaa iyadoo lagu saleynayo tirada dadka lala xiriirayo iyo nooca xiriiriyaashu ay yihiin. Siyaabaha kale ee loogu xayeysiiyo TV-ga waa, tusaale ahaan, iyada oo lagu xayeysiinayo dhacdooyinka isboorti ee telefishanka ama barnaamijyada la kafaala qaado.
Muddo hal saac ah, kannaalka TV-ga waxaa laga yaabaa inuu muujiyo ugu badnaan 12-daqiiqo oo xayeysiis ah oo carqalad kasta laga yaabo inaysan ka yaraan hal daqiiqo. Ugu badnaan boqolkiiba 15 waqtiga la baahiyo ayaa loo oggol yahay in lagu xayeysiiyo barnaamijyada ku wajahan carruurta ama baahinta adeegga looma oggolaan karo inay ku jiraan carqaladeynta xayeysiinta. Tubaakada, aalkolada iyo daawooyinka laguu qoro lama oggola in la xayeysiiyo, marka laga reebo kannaalada TV-yada ee aan ka baahin Iswiidhan, tusaale ahaan TV3 iyo Kannal 5, halkaas oo sharciya ka jira dal kasta ay khuseeyaan. Shineemooyinka, xayeysiisyada waxaa lagu muujiyaa baaritaanka filimka ka hor. Iswidhan gudaheeda, tani waxay ahayd muddo dheer aaladda ugu weyn ee xayeysiinta moobiilka ka hor intaan telefishanka ganacsigu imaan 1980-kii. Si kastaba ha noqotee, maanta, muhiimadda xayeysiinta shineemada ayaa hoos u dhacday, qeyb ahaan waxaa ugu yar booqashada shineemooyinka. Dhaqdhaqaaqa xayeysiinta ayaa si muuqata uga dhex muuqda nolol maalmeedka dadka. Tusaalooyinka qaarkood waa shaashadaha LCD ee dukaamada cuntada, maqaayadaha, makhaayadaha, tareennada, basaska iyo tagaasida.
Xayeysiinta wargeysyada iyo joornaalada ayaa ka mid ah noocyada ugu da’da weyn ee xayeysiinta. Xayeysiintu waa isha ugu weyn ee dakhliga laga helo daabacayaasha joornaalada iyo wargeysyada. Maaddaama ay jiraan dhowr wargeys oo kala duwan oo leh noocyo kala kaan ah oo takhasus leh, way fududdahay in la bartilmaameedsado koox bartilmaameed gaar ah leh. Tusaale ahaan, joornaal ka hadlaya ugaarsiga iyo kalluumeysiga, markaa waxaa habboon in dukaan lagu iibiyo badeecooyinka la xiriira ugaarsiga iyo kalluumeysiga oo ay ku xayeysiiyaan halkaas.
Faa’iidooyinka xayeysiinta ee wargeys maalinle ah ayaa ah mid la rogrogmi karo iyo sidoo kale inuu gaaro macaamiisha gadaal u dhacday. Taasi waa, dadka aan nuugin wax soo saarka cusub ilaa ay ka noqdaan qayb muuqata oo ka mid ah bay’adda isticmaalka. Faa’iido-darrooyinka ama xaddidaadda xayeysiinta noocana ayaa ah inay leedahay cimri gaaban, maadaama ay tahay mid keliya oo lagu faafiyo daabacadda maanta, waa qaali iyo inay jiraan tayo daabacan oo xaddidan.
Joornaalku waa mid faa’iido leh maadaama uu leeyahay xulasho juqraafiyeed iyo mid dimoqraadiyeed oo aad u sarreeya, akhristayaashu waxay ku faafaan aag juquraafi weyn oo ka soo horjeedda wargeys maalinle ah oo maxalli ah. Xulashada dadka waxaa loola jeedaa in dadka wadaaga danaha gaarka ah lagu faafin karo da ‘ahaan, jinsi ahaan, daqli ahaan iyo waxbarasho ahaanba. Tusaale ahaan: Faa’iidooyinka badan ayaa ah in kalsoonidu ay sarreyso, waxaa jira tayo wax soo saar sare leh, soo-gaaris ballaaran oo akhristayaasha ah iyo nolol dheer maadaama ay waqti dheer ka dhexeeyaan daabacaadda daabacan ee joornaalka wargeysyada marka la barbar dhigo wargeys maalinle ah. Faa’iido darrooyinka ama xaddidaadda ayaa ah inay jiraan waqtiyo hoggaamineed oo dheeri ah iyo kharashyo badan. Waa macquul in lagu daro xayeysiinta walxaha joornaalka, yacni saxafi ha ku daro xayeysiis joogto ah qorraaladooda. Tan marwalba lama oggola ama lama aqbali karo anshax ahaan, balse, qaabab xayeysiis ah sida PR oo loola dan leeyahay saxafiyiinta, weli saameynta waa lagu gaari karaa. Haddii xeer la jebiyo ama khilaaf xagga anshaxa ahi soo baxo, waxaad u jeesan kartaa wakiilka xayeysiinta.
Meelaynta alaabtu waa marka shey ay u muuqanayso dhagaystayaashu, waxay noqon kartaa badeecad ay ku caan baxday dabeecad filim, dukaan ama summad muuqata. Haddii ay sheyga ama summaddu si fiican u muuqdaan ama si fiican u qarsoomaan, waa meeleyn wax soo saar. Waxaa jira meeleyn shey oo dhowr nooc ah, sida: warbaahinta. Billowgii, badanaa waxaa loogu talagalay in laga daawado TV-ga. Meelaynta alaabada ayaa laga heli karaa wax kasta oo laga billaabo buugaagta majaajillada, ciyaaraha fiidiyowga iyo muusikada. Meeleynta badeecada ayaa si fiican loogu xusey warbaahinta warshadaha filimada iyadoo leh tusaalooyin dhowr ah oo caan ah. Filimada James Bond, gawaarida isboortiga ee ugu dambeysay ayaa si wanaagsan looga faa’iideysto iyadoo la adeegsanayo curcurka waxaa lagu qurxinayaa saacado fiican, tusaale ahaan, Omega.
Xayeysiinta raadinta waxaa lagu xayeysiinayaa raadinta. Maalmaha bishii agoosto 1922-dii, Idaacad ku taal New York, WEAF, ayaa baahisay xayeysiinta raadinta raadiyaha markii dambana si weyn ayaa loo aqbalay wuxuuna noqday raadiyahii ugu horreeyay ee loogu talagalay ganacsatada. Waxaa jira dhinacyo badan oo wanaagsan oo noocaan oo kale ah isgaarsiinta suuqgeynta. Mid ka mid ah kuwa ugu weyn waa in ay fududdahay in la gaaro bartilmaameedkaaga. Ayadoo loo marayo saxnaanta juqraafiyeedka iyo tirada dadka raadiyaha. Shirkaduhu waxay si gaar ah u leeyihiin xayeysiintooda si ay u arkaan meelkasta oo wanaagsan oo ay ugu fiicantahay soo celinta kalsoonida ay dadku ku qabaan. Maaddaama xayeysiinta raadintu aysan ahayn tan ugu qaalisan, shirkaduhu sidoo kale waxay gaar u tahay bartilmaameedyada ay bartilmaameedsan karaan si heer sare ah. Xayeysiinta raadiyaha ayaa fursad u siineysa inay xiriir la yeelato dadka qaatka ah ee aan firfircooneyn waxaan u isticmaalaa warbaahinta, yacni inay raadiso waxaan leeyahay asalka.
Akhriste wargeys ama booqde shineemo ayaa isbarbardhiggiisu udub dhexaad u yahay dareenka inta lafteeda. Xaqiiqda ah in xayeysiinta raadintu ay kaliya ku koobnaan karto dadka qaata iyada oo loo marayo cod ayaa loo arki karaa inay noqdaan kuwo khasaaro ah sababta oo ah inaanay ku faraxsaneyn karinta farriinta muuqaalka ah oo een daahneyn.
La soco qeybaha xiga haddii Eebbe idmo axad walba!